रोग र भोक दुवैको ओखती, कौसी खेती – WASHKhabar
रोग र भोक दुवैको ओखती, कौसी खेती
१२ असार २०७७, शुक्रबार १३:५७ 1087 पटक हेरिएको
भक्तपुर : लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्न लगाएको कौसी खेतीले काठमाडौ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रको धेरैको घरको छत हरियाली भएको छ । अघि पछि कपडा सुकाउने र घाम ताप्ने प्रयोजनका लागि मात्र काममा आउने घरको छतमा विभिन्न जातका तरकारी फलेका छन् । छतमै तरकारी फलाउन सफल भएकाहरु भन्छन् ‘पहिले देखि नै यसरी मिहेनत गरेको भए तरकारी किन्ने पैसा त जोगिने रहेछ नि ?’
हो, छतमै तरकारी फलाउन सके तरकारी किन्ने पैसा जोगिने, फोहोरको व्यवस्थापन हुने त छँदैछ, कौसी खेती रोग र भोकका लागि पनि ओखती जस्तै हो भन्नुहुन्छ विगत १५ बर्षदेखि कौसी खेती गर्दै आउनुभएकी ठिमी नगरपालिका २ गठ्ठाघर भक्तपुरकी भगवती राजभण्डारी । सुरुमा सिनामंगलमा हुँदा नै कौसीमा विभिन्न जातको तरकारी र पुष्पखेती गर्नुभएकी राजभण्डारीले गठ्ठाघरमा पनि यही कामलाई निरन्तरता दिनुभएको हो ।
कौसी खेती गर्दा मुख्य गरी पाँच वटा फाइदा पुग्ने राजभण्डारीको अनुभव छ । कुनै तालिम बिनै कौसी खेतीमा होमिएकी राजभण्डारीले हासिल गर्नुभएको अनुभव :
१. रोगको निदान
भगवती राजभण्डारीलाई मधुमेहको समस्या छ । मधुमेहको समस्या भएकाले शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने, तनावमुक्त भएर बस्नुपर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । यी दुवै कामका लागि उहाँले कौसी खेतीलाई आधार बनाउनुभएको छ । राजभण्डारी भन्नुहुन्छ ‘गमलामा उम्रेका झार केलाउने, पानी हाल्ने, मौसम अनुसारको तरकारी रोप्ने, सरसफाइ गर्ने गर्दा शारीरिक कसरत भईहाल्छ ।’ उहाँ कहिल्यै मर्निङ वाक गर्नुहुन्न । रङ्गीबिरङ्गी फूलले ढकमक्क छतको वरिपरि डुल्न थालेपछि मनमा तनावले कहिल्यै पनि बास नपाउने राजभण्डारीको भनाइ छ ।
२. फोहोर व्यवस्थापन
कौसीमा खेती गर्दा घरायसी फोहोर पनि व्यवस्थापन हुने उहाँको अनुभव छ । घरमा उब्जिने जैविक फोहोर व्यवस्थापन गर्न उहाँले गड्यौला पालन पनि गर्नुभएको छ । गड्यौला पालन र कम्पोष्ट बिनमा मल उत्पादन गर्दा जैविक फोहोर व्यवस्थापन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । तिनै फोहोरबाट उत्पादित मलको प्रयोग गरी तरकारी तथा फूल हुर्काएको राजभण्डारीले बताउनुभयो ।
३. समय कटाउने उत्तम बिकल्प
शहरी इलाकामा गृहिणी महिलाहरुको लागि समय कटाउन निक्कै मुश्किल छ । तर भगवती राजभण्डारी भन्नुहुन्छ ‘कौसी खेतीले समय गएको पत्तो नै हुँदैन ।’ दिनभरिको समय कार्यालयमा बिताए पनि बिहान बेलुकीको समय उहाँको कौसी खेतीमै बित्ने गरेको छ । राजभण्डारी भन्नुहुन्छ ‘छतमा गएर तरकारी र फूलको विरुवा सुम्सुम्याउन मात्र थाल्नुपर्छ, समय गएको पत्तो नै हुँदैन । कौसी खेती समय कटाउने अति उत्तम तरिका हो ।’
४. खर्चमा कटौती
घरको छतमा फलाएको तरकारीले छाक टर्ने भएपछि केही न केही खर्चमा कटौती हुने उहाँको अनुभव छ । आफैले उत्पादन गरेको तरकारी बिषादी रहित र अर्गानिक हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै लाभदायक हुने उहाँको भनाइ छ । ‘दिनको ३० रुपैयाँ मात्र तरकारी किन्न खर्च हुँदा पनि महिनाभरिमा करिब १ हजार खर्च हुन्छ, हजार रुपैयाँ नै जोगाउन न नसकिएला तर त्यसको आधा त जोगाउन सकिएला नि ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
५. घरको शोभा बढ्ने
घरको छतभरि फूल फूल्दा वातावरण नै हराभरा हुने उहाँको अनुभव छ । फूल नहुँदाको घरको छत उजाड लाग्ने र कौसी खेतीले घरको शोभा बढाउने उहाँको भनाइ छ । ‘घरको छतमा फूल फूलेपछि आऊँ आऊँ लाग्छ । काम भएको बेला मात्र घरभित्र बस्ने हो, अरु समयमा त घरको छतमै बसेर फूलको सुबास लिने हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।